4 ″ / 6, ETL / DLC 9W / 15W Izibani zephaneli ze-LED - I-WOSEN Led Fixture, i-China Factory, Umhlinzeki, Umkhiqizi, i-wholesaler
Izibani ze-LED Flood
Izibani zePaneli ze-LED
Izibani ze-Solar ze-LED
Izibani ze-Wallpack ze-LED
Izibani Zasemgwaqweni ze-LED
Izibani ze-Highbay ze-LED
» Imikhiqizo » Izibani zePaneli ze-LED » 4 ″ / 6, ETL / DLC 9W / 15W Izibani zephaneli ze-LED
4 ″ / 6, ETL / DLC 9W / 15W Izibani zephaneli ze-LED
Itheku: IZhongshan, China
Amandla wokukhiqiza: 1,000,000 sets ngenyanga
Inkokhelo Imigomo: T / T, B / L, PayPal njll
Isilinganiselwa se-IP: IP67
Ikhipha Umbala: 2700K-6500K
Voltage yokufaka: 120V
Amandla: 9w / 15w (4 ″ / 6 ″)
Kuvunyelwe: ETL / DLC / Energy Star
Isikhathi sokuhola: zingakapheli izinsuku ezintathu amasampula, izinsuku eziyi-3-15 zama-bulks
Material I-Aluminium + PS voltage Input AC120V
Ukukhanya kweLumen I-80-90LM / W LED SMD 2835
Usayizi 4inch, 6inch I-Fact Factor 0.9
I-CRI URa≥80 I-angle ye-Beam 120 °
Ihlala Isikhathi Esingakanani I 50,000 amahora I-CCT (K) I-2700K-6500K
Iwaranti iminyaka 5 izinga lokushisa lokusebenza -20 ~ 50ºC
Imikhiqizo iyala: Izinzuzo:
Kulinganiswe ngo-IC-Lokhu kukhanya kwe-LED okungenakukhanyiswa kukalwe nge-IC, okuvunyelwe ukuxhumana nokufakwa ophahleni, okusho ukuthi ibhokisi lokuhlangana livikelwe ngokushisa. Kudinga kuphela izikhala ezincane ezinamasentimitha angu-2, ilingana nosilingi abahlukahlukene, nama-joists. Ikani elixegisiwe alisekho umkhawulo wokukhetha kwakho.
Ukugqama Okuphezulu-Amalambu amancane angama-intshi angu-6 asebenzisa isizukulwane esisha sama-chip e-LED anamalambu aphezulu namandla aphansi. I-1200LM isebenzisa ama-Watts ayi-15, okulingana nesibani se-incandescent esingu-110W, ikongela kuze kufike ku-88% ezindlekweni zamandla. Amalensi e-Frosted LED e-anti-glare futhi emelana nokuklwebheka.
Faka kalula-Ukukhanya okukhanyisiwe kwephrofayili ephansi kufanelekile ukuhlobisa kabusha nokuhlobisa okusha: Sika imbobo ophahleni ngesifanekiso se-1: 1 hole; Xhuma i-Jbox kukhebula; Sebenzisa isiqeshana sentwasahlobo ukuyilungisa ophahleni. Akunankinga, ukufakwa kungaqedwa ngemizuzu.
Isicelo esibanzi-Umzimba omncane we-Ultra, u-5% -100% ukufiphaza okushelelayo, okuhambisana nokufiphala okuningi, indawo emanzi efanelekile, ihlangabezana nezinhlobo zezidingo kuzicelo ezifana nekhishi, igumbi lokuphumula, igumbi lokulala, indlu yokugezela, indawo yokusebenzela, izindawo ezivamile, amasokisi angaphandle nokunye okunzima ukufinyelela izikhala.
5CCT Shintsha Isicelo:
Ngokuqinile ukuphathwa ngaphansi kwe-ISO9001-2015:
Ukuhlola okokusebenza okuluhlaza⇒ Ukuhlolwa kwamandla ngemuva kokuhlangana⇒ Ukuhlolwa kokuguga
FAQ: Q1. Ngingathola i-oda lesampula lokukhanya okuholwa?
A: Yebo, samukela isampuli yokuhlola ukuze sihlole futhi sihlole ikhwalithi. Amasampuli ahlanganisiwe ayamukelekile.
I-Q2. Kuthiwani ngesikhathi sokuhola?
A: Isampula idinga izinsuku ezingama-3-5, isikhathi sokukhiqiza ngobuningi sidinga izinsuku ezingama-20-30 ngokuya ngobuningi be-oda.
I-Q3. Ingabe unomkhawulo we-MOQ we-oda lokukhanya oholele?
A: I-MOQ ephansi, i-1pc yokuhlola isampula iyatholakala.
Q4. Uthumela kanjani futhi isikhathi esingakanani?
A: Sivame ukuthumela ngomkhumbi, isikhathi sokuthumela ngokuya ngokuthi ukuphi. I-Air cargo, i-DHL, i-UPS, i-FedEx noma i-TNT iyatholakala ngesampula.Ingadinga izinsuku ezingama-3-5.
Q5. Ungawenza kanjani umyalo wokukhanya okuholwa?
A: Okokuqala, sazise izidingo noma isicelo sakho.
Okwesibili, sicaphuna ngokwezidingo zakho noma ngeziphakamiso zethu.
Okwesithathu, ikhasimende liqinisekisa amasampula nezindawo zokufaka imali ye-oda elisemthethweni.
Q6. Ingabe KULUNGILE ukuphrinta uphawu lwami kwimikhiqizo ekhanyisiwe ekhanyisiwe?
A: Yebo. Sicela usitshele ngokusemthethweni ngaphambi kokukhiqizwa kwethu futhi uqinisekise ukuklama kuqala ngokusekelwe kwisampula sethu.
I-Q7: Ingabe unikeza isiqiniseko semikhiqizo?
A: Yebo, sinikeza iminyaka eyi-2-5 iwaranti kwimikhiqizo yethu.
I-Q8: Indlela yokubhekana nephutha?
Okokuqala, Imikhiqizo yethu ikhiqizwa ngohlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi futhi izinga elingalungile lizoba ngaphansi kuka-0.2%. Okwesibili, sizothumela amalambu amasha nge-oda elisha lamanani amancane ngesikhathi sewaranti. Ngemikhiqizo yenqwaba enesici, sizoyilungisa bese siyithumela kuwe noma singaxoxa ngesixazululo kufaka phakathi ukuphinda sibize ngokwesimo sangempela.
Category Blog (1,380) Company Information (2) Imikhiqizo (34) Izibani ze-LED Flood (6) Izibani zePaneli ze-LED (13) Izibani ze-Solar ze-LED (3) Izibani Zasemgwaqweni ze-LED (5) Izibani ze-Wallpack ze-LED (3) Izibani ze-Highbay ze-LED (4)